कस्तो भयो ओली-नेपालको वार्ता ?, कसले के भने ? « Salleri Khabar
कस्तो भयो ओली-नेपालको वार्ता ?, कसले के भने ?
२४ असार, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)को आन्तरिक विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच आजको भेटवार्ता सकारात्मक भएको छ ।
नक्सालस्थित होटेल मेरियटमा भएको वार्तामा विवाद समाधान खोज्न गठित कार्यदलका केही सदस्यले हालसम्मको सहमतिको प्रयासबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । तयसपछि उनीहरुबीच अलग–अलग वार्ता भएको थियो ।
वार्तामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले नेपालसमक्ष विपक्षी गठबन्धन छोडेर आफूलाई निःशर्त सहयोग गर्न भनेका थिए । तर उनले जेठ २ को विषयमा कुनै कुरा ननिस्किएपछि नेता नेपाल सहमत नभएको बताइएको छ ।
‘छलफलमा नेता नेपालसँग ओलीलेभने, तपाईहरु विपक्षी गठबन्धनमा लाग्नुभयो । त्यसलाई छोड्नुपर्छ । विपक्षी गठबन्धनले मलाई अफ्ठेरोमा पारिरहेको छ । त्यसलाई छोडेर मलाई सहयोग गर्नुहोस् । म अफ्ठ्यारोमा छु’,।
जवाफमा नेपालले भने, ‘पार्टी मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिलेका जति पनि राष्ट्रिय समस्याहरू छन् ती सबै समस्याको मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । अरूलाई दोष दिएर मात्र हुन्न । त्यसका लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ’, ।
भेटमा ओलीले जेठ २ को वरिपरि कसरी जाने भन्ने विषयमा कुरा गर्न नचाहेको बताइएको छ ।
वार्तामा सहभागी पार्टीका उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले पार्टीको एकतालाई प्रभावकारी परिणामा लाने सम्बन्धमा गम्भीररुपमा कुराकानी भएकाले शीर्ष तह र कार्यदलमा निरन्तर छलफल गरेर समाधान निकालिने बताए । वार्तास्थलमा रावलका साथै एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पनि सहभागी भएका थिए ।
शीर्ष नेताबीच गत जेठ २ गतेको सहमतिमा १० सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।सो कार्यदलको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकले प्राप्त परामर्शका आधारमा तयार गरिएको सहमतिको मस्यौदालाई शीर्ष तहमा प्रस्तुत गर्ने समझदारी भएको थियो ।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली पक्षबाट नेताहरु नेम्वाङ, पौडेल, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, शङ्कर पोखरेल, विष्णु रिमाल छन् भने नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबाट डा. रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्णराज विष्ट र रघुजी पन्त रहेका छन् ।